Apple inogona munguva pfupi kuvhura yakagadziridzwa iPad Air | Nhau dze iPhone
Apple inogona kukurumidza kuburitsa yakagadziridzwa iPad Air
Tony Cortes | | iPad Air, dzakawanda
Yazvino chizvarwa chechina iPad Air inoratidzika kwandiri piritsi zvakanyatsorurama uye zvine mwero iyo Apple parizvino. Kunze kwekunge iwe uchida chidzitiro chakakura uye ukasarudza iPad Pro, iyo iPad Air ndiyo yakanyanya kuenzana kukosha kwemari, uye iine anenge ese maficha emukoma wayo mukuru. Iwe unotoyera kuti nei uchida iPad Pro ine M1, isina macOS ...
kuenderana ne in Apple Pencil 2, dhizaini yayo yekunze uye maficha ayo anoita kuti ikodzere kubhadhara zvishoma pane yekutanga iPad. Uye kana Apple ikafunga kuivandudza, kuvandudza processor, kamera uye skrini, ichave mukaka, pasina kupokana.
Zvinoita kunge (uye zvine musoro, zvirokwazvo zvichave) kuti Apple inoronga kuvhura a iPad Air renovated. Ichave chizvarwa chechishanu cheyepakati modhi yeApple iPad, inofamba neiyo iPad uye iPad Pro.
Sezvakaburitswa Mac Otakara, Apple inoronga kukurumidza kuvhura gadziridzo yeyazvino iPad Air, iyo yaizochengetedza kutaridzika kwayo kwekunze, uye kugadziridzwa kwaizongove kwayo. zvemukati zvemukati.
Chirevo ichi chinotsanangura kuti chizvarwa chechishanu chePad Air chaizoisa processor A15 Bionic, kamera yekumberi yakafaranuka 12 megapixels nerutsigiro rweCentre Stage, 5G kubatanidza yeLTE modhi uye flash True Tone Quad-LED.
Tichazviona here muna Kurume?
Kana tikafunga kuti pachivanhu chiitiko chekutanga Apple yegore kazhinji iri munaKurume kana ichangoburwa muna Kubvumbi, zvinogoneka kuti Tim Cook nechikwata chake vachatipa nechizvarwa chitsva ichi cheyazvino iPad Air mukutaura kwakakosha.
Kana ese aya makuhwa ari echokwadi (aangave ari, sezvo yazvino iPad Air yakaburitswa muna Gumiguru 2020), uye Apple inosuma zvese izvi zvigadziriso pasina kuwedzera mutengo, pasina kupokana ichava iyo yakanyanya kuenzana iPad yemhando nhatu, yakanakira. marudzi ese evashandisi, kunyangwe akanyanya kudiwa. Ndinodzokorora mubvunzo kubva pakusuma: sei uchida a iPad Pro neM1 processor, kana iwe usingakwanise kuisvina ne macOS?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple inogona kukurumidza kuburitsa yakagadziridzwa iPad Air
Ricardo Adams P. akadaro
inoita 4 mwedzi
Ini ndinofunga kufunga kuti iyo 11 ″ Ipad pro isarudzo iri nani yekuwedzera USD $200, une Chip M1, iyo isati yashandiswa zvakakwana, ichokwadi, asi ine mukana mukuru, chengetedzo yakapetwa kaviri, pro motion screen, zviri nani. makamera, USB mhando C ine Thunderbolt tsigiro, ruzha rwuri nani, face id uye kuita wongororo yepeji nekukurumidza, ndakasarudza iyo 11 ″ pro ndichiona kuti mutsauko wemutengo waikodzera zvakanyanya.
Mhinduro kuna Ricardo Adasme P.
Vagadziri vePUBG vanomhan'ara Apple neGoogle nekusabvisa Mahara Moto kubva muzvitoro zvavo
Iyo yakanakisa yekuchaja accessories kubva kuESR uye Syncware ye iPhone yako